Ngaba uza kuyithenga i-iPhone X entsha? [Uphando] | Ndisuka mac
Sisondele ukuyibona kwaye siqinisekile ukuba uninzi lwenu luceba ukuthenga i-Apple iPhone entsha. Ngamafutshane, kolu phando lincinci sifuna ukwazi indlela ocinga ngayo kwaye jonga ukuba ucinga ngokuthenga i-iPhone X entsha okanye hayi.
Asithethi nge-iPhone 8 okanye i-8 Plus ekuthiwa iza kuziswa nayo, sithetha ngemodeli yeenkwenkwezi eyayiza kwenziwa kwintetho ephambili yanamhlanje eSteve Jobs Theatre. Ke umbuzo ulula kwaye ucacile, Ngaba uza kuyithenga i-iPhone X entsha?
Ngaba uza kuyithenga i-iPhone X entsha?
Ewe kudala ndilindile
Hayi ndiyaphila ne iPhone yam
Iya kuxhomekeka kwixabiso kunye nokubalulwa
Kungenzeka ukuba impendulo yakho kumbuzo inde kancinci kodwa oku kukufumana umbono wabasebenzisi abaye bacinga ngayo ixesha elide okanye abafuna ukuthenga i-iPhone entsha kwaye sele begqibe ekubeni uza kuthenga le nguqulo intsha. Nangeyiphi ndlela Unamagqabaza asebenzayo ukuze ukwazi ukwandisa impendulo yakho kancinci okanye unike uluvo lwakho kuyo.
Kwelinye icala, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba imodeli entsha ye-iPhone iseyindumasi kwaye inokuba kunjalo ukuba olu luyilo silubona ngaphezulu kwesaveyi kuphela olufumanekayo. Kuya kufuneka ukuba unike ingqwalaselo kwintetho yanamhlanje kwaye ngaphezulu kwako konke kucace ukuba ukuza kuthi ga ngoku akukho nto iqinisekisiweyo ngokusemthethweni, ke singathatha omnye umothuko kule ntetho iphambili yenyanga kaSeptemba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » iPhone » Ngaba uza kuyithenga i-iPhone X entsha? [Uvoto]
Iminyaka emithathu kunye ne-3 Plus yam lixesha lokuyihlaziya i-iPhone ye-X
Abantu abaninzi abanee-5s basenokwenza ukutsiba kule modeli intsha, masibone ukuba basifundisa ntoni!
Emva kokubona intetho ephambili ndingathi andizisoli ngokuchitha iminyaka emi-3 ndigcina umbono yayikukuhlaziya kunyaka ophelileyo kodwa ndithe ndakubona iRefrit ndagqiba kwelokuba ndibambe omnye unyaka kwaye kufanelekile ukugcinwa kwayo kundinika i-iPhone x 256 GB yesilivere ngokufanelekileyo, ukusukela xa ndinayo ukuqala enye ibhanki yehagu iminyaka emi-3 ukusukela ngoku
Andikwazi ukuchitha i-euro ezingama-1000 kwifowuni EPHATHEKAYO ... ukuba ndinako, ndingayithenga.
Injongo yam kukulinda unyaka ozayo xa zonke ii-iPhones eziphumayo zinescreen se-oled (ndiyathemba) kwaye ziza ngaphandle kweefreyimu ukutshintsha iselfowuni kwaye zichithe ubuninzi be- € 700.
Ndine-iPhone 6, kufuneka ndiyitshintshe kodwa andizimisele kuhlawula + € 1.000 (ndicinga ukuba kungabiza i-1.200 ngokuthathela ingqalelo iirhafu kunye nokuguqulwa kweedola), ndicinga ukuba siphulukana nomntla… . kokuncinci ngakumbi ndizithengela iMacbook (i-1.200 eAmazon). Ndiyayithanda iApple kodwa ndicinga ukuba iyenzeka ngamaxabiso ... ndineMacBook Pro ukusukela ngo-2011 bendifuna ukuyitshintshela iMacBook Pro yangoku kodwa ixabiso le- € 2.000 ndibona elidlulileyo ... Ngamafutshane ndiza kuqhubeka endinayo ngoku kude kube iApple ibeka amaxabiso afanelekileyo. Uya kundixelela ukuba kukho iimveliso ze-Apple ezingabizi kakhulu (Umzekelo, i-iPhone SE ye-400 euros)… kodwa i-iPhone 6 ngelo xesha yayiyeyona nto iphambili kuluhlu kwaye ngoku ndithelekisa umphezulu woluhlu lwe-iPhone x….
Hayi, kujongeka ngathi i-Samsung ilahlekile
Ndithenge i-iPhone 7plus kwiinyanga ezili-9 ezidlulileyo, i-128 Gb. Andiyithandabuzi: kwiinyanga ezimbalwa…. ye-iPhone X !!!!!!!!!!
Umnyhadala weApple uqalisa eApple Park!